Digital Media Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Digital Media File
> Resource > Ladnaansho > Digital Media Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Digital Media File
Sidee ayaan u soo kaban karto, tirtiray Digital Media File?
Hey, gabadhayda yar si qalad ah qaar ka mid ah files warbaahinta digital tirtiray ka drive dibadda adag. Waxay ka mid yihiin qaar ka mid ah sawirada iyo videos. Nasiib darro ma ahan in aan gurmad kasta oo iyaga ka mid ah. Ma jiraa hab aan iyaga soo celin karaa? Waxa ay ii sidaas oo qaali ah. Fadlan ii caawin!
Maalmahan, warbaahinta dhijitaalka ah sida videos, sawiro iyo heeso kaalin aad muhiim ugu tahay nolosha maalin walba. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta dhijitaalka ah ayaa weli lagu lumin karaa ka your computer, camera ama lagu kaydiyo qalabka dijitaalka ah sababtoo ah tirtirka, formatting, musuq-maasuq, weerar virus ama xitaa baadi nidaamka. Ha argagixin! Waxaad tahay badan tahay inuu ka soo kabsado file warbaahinta digital lumay inta ay aanay ka overwritten by xog cusub.
Si aad u soo kabsado file warbaahinta dhijitaalka ah, marka hore u baahan tahay inaad joojiso gelinaya wixii xog ah oo cusub si aad qalab drive ama kaydinta iyo markaas ka heli barnaamijka warbaahinta lagu kalsoonaan karo digital caawimaad. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Codsigan kama dambaysta ah aad u saamaxaaya in ay soo kabsadaan dhammaan noocyada kala duwan ee files warbaahinta dhijitaalka ah ka drive your computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo, oo ay ku jiraan videos, sawiro iyo files audio.
Barnaamijka waxaa si buuxda la jaan qaada PC Windows iyo qalabka Mac. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah inuu ka soo kabsado file warbaahinta dhijitaalka ah hadda!
Qabtaan Digital Media Recovery in 3 Talaabooyinka
Halkan aynu bilaabi Digital warbaahinta kabashada la version Windows. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad ka shaqayn kartaa dib u soo kabashada ee isku tallaabooyin la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho inuu ka soo kabsado file warbaahinta digital lumay
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo barnaamij Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah si ay u bilaabaan.
Si aad u soo kabsado file warbaahinta digital lumay, "lumay Recovery File" mode noqon kartaa isku day fiican.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado file warbaahinta dhijitaalka ah ka your computer, aad u baahan tahay si loo soo dajiyo barnaamij ku saabsan drives kale / qoruhu on your computer. Ka sokow, waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab aad kaydinta la your computer haddii warbaahinta dhijitaalka ah uu lumo ka.
Tallaabada 2 xijaab Scan / kaxayn raadiyo file warbaahinta dhijitaalka ah laga badiyay
Halkan kaliya u baahan tahay in aad dooratid xijaab / drive meesha digital file warbaahinta lumay ka oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
"Enable Deep Scan" doorasho ka caawisaa in ay ka qalab aad iskaan formatted file warbaahinta dhijitaalka ah.
Tallaabada 3 kabsado files warbaahinta dhijitaalka ah laga badiyay
Files la helay ee ku saabsan la marsiiyey xijaab / drive noqon doonaa liiska in "Nooca File" ama "Jidka" category. Waxaad ka arki kartaa magacyada file ama images Falanqeynta in lagu hubiyo sida badan oo ka mid ah laga badiyay files warbaahinta dhijitaalka ah la soo kabsaday karo.
Markaas waxaad dooran kartaa in aad files warbaahinta digital badiyay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Waxaad isma badbaadin karo file warbaahinta dhijitaalka ah ka soo kabsaday in ay goobta asalka ah si looga fogaado in xogta overwritten.